तरकारीमा विषदीको प्रयोग बढ्दो
Thursday August 5, 2021 | |
जनस्वास्थ्य माथि गैर जिम्मेवार बन्दै छ सरकार
काठमाडौं । महङ्गो पैसा तिरेको छ अनि, झलक्क देख्दा टलक्क छ भन्दैमा फलफूल तथा तरकारी खाइ नहाल्नुस् । तपाईंले सेवन गरेको फलफूल र तरकारीले तपाईंको स्वास्थ्यमाथि गम्भिर असर गर्न सक्छ । किनकी अहिले बजारमा पाईने अधिकांश फलफूल तथा तरकारी विषादीयुक्त भएको खुलासा भएको छ ।
विषादीको प्रयोग बढ्दो तर, परिक्षण फितलो
त्यसो त नेपालमा कृषिजन्य उत्पादनमा विषादीको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्रै ५ लाख ७४ हजार ६० किलो विषादी खपत भएको थियो । यो विषादी खरिदका लागि ६९ करोड ४८ लाख ४ हजार ७१ रुपैयाा खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै विषादी तरकारीमा खपत हुने गरेको छ । बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार, तरकारीमा मात्रै ८५ प्रतिशतसम्म विषादी प्रयोग हुने गरेको छ ।
कृषकले बोट ठुलो बनाउन, फल धेरै फलाउन र लामो समयसम्म टिकाइ रहन आवाश्यकता भन्दा बढी मल र घातक बिषाधी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कृषकले माटोको उर्वरता नासिने ढंगले मल तथा बिषादी प्रयोग गर्ने तरिका नमिलाउदा उत्पादनमा धेरै समस्या देखिने गरेको छ । यता कृषिजन्य उत्पादनमा विषादीको प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे सरकारी तवरबाट कुनै पनि अनुसन्धान गरिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को तथ्यांकअनुसार विषादीकै कारण विश्वमा हरेक वर्ष ३ लाख ५५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । ४ करोड मानिसमा विषादीले कुनै न कुनै रूपमा असर गरेको हुन्छ । तर, विषादीको बढ्दो प्रयोग र असरका विषय बाहिर आएपनि विषादीको परिक्षण संयन्त्र भने एकदमै फितलो छ । नियमनकारी निकाय यति सम्म लाचार छन् की विषादी परिक्षण गर्ने मेसिनको समेत सहि सलामत प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।
हो ब्यापारीले धेरै नाफा कमाउने होडबाजीका कारण बजारमा आएका फलफूल तथा तरकारीमा विषादी प्रयोग गरिंदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथी गम्भिर खेलवाड भैरहेको छ । बाली संरक्षण निर्देशनालय मातहतको द्रुत बिषादी अवशेष विश्लेषण इकाईले अर्गानिक फास्फेट र कार्वानेट नामक विसादी मात्र परिक्षण गर्ने गर्छ । भारत लगायत विभिन्न ठाउँवाट काठमाडौं आयात हुने फलफूल मुख्यत: कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार, कुलेश्वर र बल्खु तरकारी बजारमा भण्डारण गरेर कारोबार हुने गर्दछन् । तर बाहिरबाट भित्रयाइएका तरकारी तथा फलफुलको बाली संरक्षण निर्देशनालय मातहतको द्रुत बिषादी अवशेष विश्लेषण इकाईले कालिमाटी तरकारी बजारमा ल्याइएका नमुनाको मात्र परिक्षण गर्ने गर्छ । त्यो पनि बिहान ६ वजे भित्र भित्रिएका फलफूल र तरकारीको मात्रै ।
सार्वजानिक विदामा हुँदैन परिक्षण
अचम्म त के छ भने सार्वजनिक विदाको दिन त कालिमाटी भित्रिएका फलफूल तरकारीको पनि कुनै परिक्षण गरिदैन । हुनपनि जसले जे गरेपनि हुने । जिम्मेवार निकायले मानवस्वास्थ्यका लागि केही सोच्नै नपर्ने । लापरवाहीको यस्तो पराकाष्ठा कहिलेसम्म कायम रहन्छ ? तरकारीमा थुप्रै प्रकारका बिषादीहरु प्रयोग हुन्छन । तर, कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेको परिक्षण इकाईले दुई प्रकारका रसायनको मात्र परीक्षण गर्छ । त्यस्तै कर्मचारीको वेवास्ता पनि उत्तिकै छ । सबै खाले विषादी परिक्षण गर्ने उपकरण नहुँदा मृत्यु बेच्नेहरु निर्धक्क छन् । उपलब्ध उपकरण पनि जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि उपयोग भइरहेको छ । यसखाले बेथीतिका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दो छ । एकातिर रसायनको परिक्षण गर्ने प्रयाप्त प्रविधी छैन । अर्कातिर भएको प्रविधिको पनि राम्ररी उपयोग हुन सकेको छैन । कर्मचारीको लापरवाही पनि त्यस्तै छ । ब्यापारीको जनता लुट्ने प्रबृत्ति पनि निरन्तर जारी छ । तर सम्वन्धित निकायको ध्यान कता छ ?
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य घिमिरे माथि गुण्डा नाइके ‘सगुन’ र ‘झिङ्गे’को समूहबाट आक्रमण
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्यको बिषयमा बागमती प्रदेशमा…
८५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी खारेजीको जोखिममा
आरोपितलाई छुटाउन मन्त्रीको दौडधूप दलित समुदायकै घाउमा ‘नुनचुक दल्नु’ सरहः डा. भट्टराई
सरकारको आदेश अटेर गर्ने उद्योगलाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागको एक्सन
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ललितपुरका १० उद्योगलाई आदेश अटेर गरेको भन्दै तीन दिनभित्र उपस्थित हुन पत्राचार गरेको…
तनहुँ । ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागतमा तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण सुरु गरेको एक सय ४० मेगावट क्षमताको…
मुआब्जा विवादले विद्युत् आयोजना प्रभावित
राससबागलुङ, जैमिनी नगरपालिकास्थित ठेउलेखोला जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ । जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण फागुनभित्रै नियमित विद्युत् उत्पादन…
अनुदानको चामल बाटैमा बिक्री
कालिकाेट । नेपाल खाद्य संस्थानको कालिकोट थिर्पु डिपोबाट बिक्री हुनुपर्ने चामल ठेकेदारले बढी मूल्य पाएपछि बीचबाटोमै बिक्री गर्ने गरेका…
काठमाडौं,– अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । चालू आवका लागि संसद्ले १२ खर्ब ७९ अर्बको…
एनसीसी बैंक घोटाला प्रकरण : १३ जना फन्दामा, ३० जना भन्दा बढी अनुसन्धानको दायरामा
काडमाडौं । गत शुक्रबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लिमिटेडमा छापा मारी तत्कालीन एपेक्स…
घोषणापत्र एकातिर, बजेट अर्कोतिर
काठमाडौं – निर्वाचनअघि गरेको प्रतिवद्धताअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पनि घोषणापत्रमा अगाडि सारेका योजना बजेटमा समावेश हुन सकेनन्…
के तपाईं पेट बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने यसो गर्नुस
नमोटाउन्जेल मोटाउने रहर हुन्छ र मोटाए पछि पेटमा वोसो वढेर हैरान । तर जब मान्छे मोटाउन थाल्छ तब फुक्दै गएको…
काठमाडौं उपत्यकामा रगतको चरम अभाव
काठमाण्डौ । दुर्घटनापछिको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि अनिवार्य मानिने रगत काठमाण्डौ उपत्यकामा भने एक महिनादेखि अभाव हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन…